Margarekha जुम्लामा गान्धी – Margarekha
न्यूयोर्क (अमेरिका) — नेपालको राजनीतिक मौसम देखेर होला २०४६ सालमा बहुदलीय व्यवस्था स्थापना गर्न गरिएको आन्दोलनमा भाग लिएका मेरा एक मित्रले मलाई सोधे, “के लोकतन्त्र अहिले खतरामा छ ?” मैले उनलाई भनेँ, “सक्छौ भने जुम्ला जाऊ ।”मेरा मित्रले मलाई यसरी हेरे मानौं उनका आँखा भन्दै थिए, “मगज खुस्केको मान्छे, मेरो यति सिधा प्रश्नको यति टेडो जवाव?”
हेर्दा साधारण लाग्ने यो तस्बिर बिल्कुल साधारण छैन । पहिलो कुरा यो तस्बिर काठमाडौंको होइन । दोस्रो, “आइ यम विथ डा. के.सी” भनेर सेतो कागजमा लेखेर जुम्लेली जनताले सेल्फि खिचेर गम्भिर मुद्दालाई हल्का बनाएनन् । बरु अगाध माया र न्यानोपन दिए । तेस्रो, तस्बिर नियालेर हेर्ने हो भने, गान्धीको छायाँ देख्न सकिन्छ । मैले डा. केसीलाई गान्धीको दर्जा दिन खोजेको होइन । खाली यतिमात्र भन्न खोजेको हुँ, उनी एक सत्याग्रही हुन् । मेरो लागि सत्याग्रही शब्दको र रचयिता गान्धी हुन् । सत्य, आग्रह भएको न्यायको लागि लड्ने हरेक व्यक्ति आफैँमा सानो, ठुलो गान्धी हो ।
यसो भनी रहँदा डा. केसी कसरी सत्याग्रही भए त? काठमाडौंमा देखिने भीड के हो? र डा. केसीको जीवन किन अमूल्य छ भन्ने प्रश्नको जवाफ खोज्न जरुरी हुन्छ । गान्धीले “मेरो सपनाको भारत” ( मधुसुदन अधिकारीद्वारा अनुवादित ) किताबमा भनेका छन :
यो समय डा. केसीको कमजोरी केलाउन उपयुक्त समय होइन । उनी अहिले जीवनसँग संघर्ष गर्दै छन् । उनको बारेमा नकरात्मक टिप्पणी गर्नु असमवेदनशील हुन्छ । तर गान्धीको परिभाषामा खरो उत्रिन गान्धीले भने झैं लोकमतलाई एक सत्याग्रहीले प्रभावित र शिक्षित तुल्याउनु पर्छ । गान्धी अगाडि भन्छन्, “प्रतिपक्षको कुभलो चाहनु या उसको क्षतिको कामना गर्नु, यी दुई भनाईको विश्लेषण गर्ने हो भने केही समय पहिले डा. केसीको केही व्यक्तिसँग भएको वाक-युद्धले डा. केसी चुकेका त होइनन भन्ने भान हुन्छ । डा. केसी एक मानव न हुन् । सत्याग्रह एउटा सिक्ने प्रकृया पनि हो ।
दोस्रो सवाल, काठमाडौंको भीड डा. केसी अनसन बस्दा मात्र किन उर्लन्छन् ? उनको अनसन अघि ब्यापक जनमत तयार पार्न किन अग्रसर हुँदैन? “आइ एम विथ डा. केसी ” भनेर किन सेलिब्रिटी बन्ने प्रयास गरिन्छ? किन सोझो, सालिन मानवताका प्रतिमुर्ती एक चिकित्सकको जीवनलाई तमासा बनाइन्छ ? तपाईं डा. केसीको साथमा हुनु हुन्छ, हुनुहुन्न, त्यो नाराले केही अर्थ राख्दैन । चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा सुधारका लागि अनवरत संघर्षशील डा. केसीले प्रा. केदारभक्त माथेमाको नेतृत्वमा बनेको समितिको प्रतिवेदन अनुरुप आउँदो दश वर्षमा काठमाडौंमा कुनै पनि मेडिकल कलेज खोल्न नहुने र एउटा विश्वविद्यालयले पाँच वटा भन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने नसकिने सुझावको कार्यान्वयनका लागि माग राखेका छन् । यी मागको जनमुखी पाटो छ । स्वास्थ्य सेवालाई जुम्ला जस्तो ठाउँमा सहज तरिकाले पुर्याउने उनको सपना छ । जो आफुलाई उहाँहरूको समर्थक भन्नु हुन्छ, डा. केसीका सिद्धान्त र कामलाई तपाईंले कसरी सहयोग गर्नु भएको छ, भिड जम्मा गर्नु वाहेक? अर्थ यसले राख्छ । यही भिन्नता छ जुम्ला र काठमाडौंमा ।
मित्र त्यसैले, मैले लोकतन्त्र खतरामा छ भन्ने तपाईंको प्रश्नको जवाफको उत्तर खोज्न जुम्ला जानु भनेको हुँ । जबसम्म तपाईं जस्ता लोकतन्त्रका सिपाही र डा. केसी जस्ता सत्याग्रही लडिरहन्छन् । लोकतन्त्र खतरामा हुनै सक्दैन । खतरामा त लोकतन्त्रलाई कुल्चने प्रयास गर्नेहरू हुन्छन् । ईतिहास यसको शाक्षी छ ।कान्तिपुर दैनिकबाट
३ श्रावण २०७५, बिहीबार ०८:०२ प्रकाशित